Yarrad (Af Ingiriis : dowry; ) sidoo kale loo qoro Yarad, waa lacag ay bixiyaan qoyska wiilka caruuska ah ee guursan raba gabadh taasi oo ujeedadeedu tahay in reerka gabadha dhalay loogu mahadnaqo ogolonshaaha doonista iyo arooska gabadhooda. Dhinaca kale, guurku waa midowga lamaane si u sii wadaan jiritaanka aadamaha. Guurku wuxuu ahaa mid soo jireen ah tan ilaa wakhtiyadii ugu horeeyay ilbaxnimada dadka. Dunida maanta waxaa ka jira nidaamyo iyo caadoyin badan kuwaasi oo ku salaysan dhaqanka, dhaqaalaha, wadanada, diinta iyo nolosha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yarrad&oldid=218287"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2021, marka ee eheed 11:29.